တည်ဆောက်ဆဲ ဓာတ်ဆီဆိုင်ကို ဖွင့်ခွင့်မပြုရန် တောင်ဥက္ကလာတွင် ဆန္ဒပြ - Yangon Media Group
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်အတွင်း တည်ဆောက်ဆဲ ဓာတ်ဆီဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ဖွင့်ခွင့်မပြုရန် လူအင်အား ၁ဝဝ ဝန်းကျင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (၅)ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူ ၁ဝဝခန့်သည် ယင်းရပ်ကွက် ပါရမီလမ်းပေါ်တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် City Energy ဓာတ်ဆီဆိုင်ပိတ်သိမ်း ရေးအတွက် ဒီဇင်ဘာ၁၂ရက် နံနက် ၈နာရီမှစတင်ကာ တကောင်း ၁ဝ လမ်းထိပ်စုရပ်မှလူစုပြီး ဆန္ဒထုတ် ဖော်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဆန္ဒပြသူများသည် မီးဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ဒို့အရေး၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်အတွင်း မီးဘေးအန္တရာယ်ကြီးမားသော ဓာတ်ဆီဆိုင် ချက်ချင်းဖျက်သိမ်းပေး၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်ပြည်သူများ မီးဘေးအန္တရာယ်မကျရောက်ရေး အစိုးရမှကာကွယ်ပေး စသည့်ကြွေးကြော်သံများပါရှိသည့် ဆိုင်းဘုတ်များကိုင် ဆောင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြသူများသည် ဖွင့်လှစ်မည့် ဓာတ်ဆီဆိုင်ရှေ့မှစတင်ကာ စည်ပင်ရုံးရှေ့နှင့် မြို့နယ်အုပ် ချုပ်ရေးမှူးရုံးရှေ့အပါအဝင် ရပ်ကွက်အတွင်း မွန်းတည့် ၁၂နာရီအထိ လှည့်လည် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြကာရပ်ကွက်နေ ဦးသန့်မြင့်ဦး အပါအဝင် ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ၁၅ ဦးက ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး တရားဝင်ခွင့်ပြု ချက်ရယူကာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဦးဆောင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးသက်နိုင်က ”ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဖွင့်မလို့လုပ်နေတာပေါ့ နော်။ ဒါပေမဲ့ ရပ်ကွက်နေပြည်သူ တွေက မလိုလားဘူး။ အဲဒါကြောင့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာပါ”ဟု ဒီမိုကရေ စီတူဒေးသို့ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်က ပြောသည်။ တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့် ဓာတ်ဆီဆိုင်သည် အိမ်နှစ်အိမ်ကြားတွင်တည်ရှိကြောင်း၊ ဓာတ်ဆီဆိုင်၏နောက်တွင်လည်း အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် ကော်လုပ်ငန်းရှိကြောင်း၊ ယင်းအပြင်ဆိုင်၏ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်တွင်လည်း ကားမှတ်တိုင်တည်ရှိပြီး ဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းတစ်ခုလည်း ယင်းအနားတွင်တည်ရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။ အဆိုပါဓာတ်ဆီဆိုင်အဆောက် အဦတည်ဆောက်မှုမှာ ၇၅ရာခိုင် နှုန်းခန့်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဗဟိုဘဏ်မှ ဒေါ်လာ ၈၁ သန်းခိုးယူခံရမှု မိမိတို့နှင့် မသက်ဆိုင်ဟု ဖိလစ်ပိုင်ဘဏ်ြ??
သတင်းမီဒီယာလောက၏ ပြောင်းလဲမှုနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရန် လူငယ်သတင်းသမားများ ဘ??